Fanofanana mpampianatra iarahan’ny METFP sy ny UNESCO amin’ny sehatr’asa “tailleur de pierre” sy “poseur de pavé” – METFP
Fanofanana mpampianatra iarahan’ny METFP sy ny UNESCO amin’ny sehatr’asa “tailleur de pierre” sy “poseur de pavé”
Misy ny fanofanana ireo mpampianatra miisa 28 avy amin’ny faritra 9 eto Madagasikara izay iarahan’ny METFP sy ny UNESCO amin’ny sehatr’asa “tailleur de pierre” sy “poseur de pavé”. Marihana fa tontosa izao fanofana izao dia noho ny fangatahan’ny Governora isa-paritra ka izany indrindra no namolavolana ity hetsika ity hamaliana ny filàn’ny faritra tsirairay avy. Ireto mpampianatra ireto dia avy amin’ny sekoly teknika avokoa ary mandritry ny 3 herinandro ny faharetan’ny fanofanana. Misy ny “théorie” ary mitohy amin’ny fampiharana avy hatrany. Ny mahakasika ny asa “tailleur de pierre” dia natao tany amin’ny carrière Tsaralamaka Kaominina Ambohijanaka. Nofanina tamin’ny asa rehetra mahakasika ny fanapoahana vato, ny famakiana izany ho lasa malao sy ny pitsopitsony rehetra. Rehefa vita izay dia niroso tamin’ny fametrahana ny pavé ireo mpampiofana ary tao amin’ny CFPF Tsimbazaza no nanatanterahana izany. Natoro azy ireo ny andininy mikasika ny fametrahana ny rarivato, ny fanamboaran-dalana, ny fanajana ny sisin-dalana…. Hinoana sy hantenaina fa hitondra fampandrosoana isaky ny faritra ny fanamafisam-panofanana toy itony.
Notolorana ny “attestation de formation” ireo mpampianatra 28 mianadahy ny zoma faha 18 desambra 2020 tao amin’ny Amphi Ampefiloha. Tonga nanome voninahitra izany fotona izany Atoa TSIKEL’IANKINA Ernest, Ministry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak’Asa, ny Tale Jeneralin’ny fanofanan arak’asa sy ireo tale hafa eto anivon’ny METFP.
Nandritra io fotoana io ihany koa no nanolorana ny “attestation de formation” ho an’izy 10 mirahavavy avy any Bekopaka, nanaraka ny fanofanana mikasika ny Broderie sy Vannerie nandritry ny 1 taona ka ny 2 volana dia natao teto Antananarivo. Hisaorana ny UNESCO, izay nanome tanana ny Ministera tamin’ny fampivoarana ireto sehatr’asa ireto.